Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay Saddex Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab - Awdinle Online
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay Saddex Xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomalia ayaa Maanta waxaa ay xukuno kala duwan ku riday Saddex xubnood oo ay haweeneey ku jirto, kuwaas oo lagu helay inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab.
War kasoo baxay Maxkamadda Ciidamada ayaa waxaa lagu sheegay in Deeqo Maxamed Qeyliye Sabriye, Cabdikariim Maxamuud Cusmaan iyo Maxamed Siid Cali Maxamuud loo xiray july 19-keedii la shaqeynta Al-Shabaab iyo in ay ahaayeen koox wada degan oo ka shaqeysa Gudbinta iyo Keydinta Agabka Ciidan ee loo adeegsado dilalka gaadmada ah.
Deeqo Maxamed Qeyliye ayaa sheegtay in ay Alshabaab kaga biirtay Shabeellada Hoose 2016, waxa ay Gunno ahaan u qaadan jirtay $150 bishiiba sida lagu sheegay Warka Maxkamadda Ciidamada.
Sidoo kale Maxkamada Ciidamada ayaa sheegtay in Cabdikariim Maxamuud Cusmaan iyo Maxamed Siid Cali Maxamuud si lamid ah labadan eedeysane ay Al-Shabaab kaga biiray Shabeellada Hoose 2016, Muddo la barayay Fasirka Qaldan ee Diinta ugu dambeyn waxaa lagu qanciyay in ay Bartaan farsameynta Qaraxyada.
Deeqo ayaa lagu soo xiray labadaba waxa ayna hoy ka siisay gurigii loo qorsheeyay ee u joogtay sidii Hooyanimo aan la Ogeen dhagarsi howlaha ay doonayaan ay u fushadaan.
Labada Eedeysane oo ku dhaawacmay Qarax uu aasayay Nin kale oo iyaga la socday July 2020 degmada Yaaqshiid gaar ahaan SOS ayay Ciidama Amniga ku soo qabteen, waxa ayna sahashay Farsamada kale ee dhalisay in la soo Gacan geliyo Deeqo Maxamed oo u aheyd Sarkaalad u sameysan Hooyanimo & Oori.
November Sanadkan ayaa lagu wareejiyay sedaxda eedeysane Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida, waxa ayna baaritaan dheer kadib Codsadeen Muddeynta Maxkamadeed Bartimihii bishii 11-aad ee Sanadkan.
Previous articleQarax geystay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Muqdisho
Next articleRW Rooble oo Magacaabay Xoghayaha joogtada ee Xafiiskiisa